फिफा विश्वकप–२०१८: कसरी शुरुभयो ? के छन् यसपटकका विवाद ?
Sunday, 10 Jun, 2018 5:59 PM
काठमाडौैं, २७ जेठ – बिश्वकप फुटवल आउँदो बिहीवारबाट रुसमा सुरु हुँदैछ । विश्वकप सुरु हुन तीन दिन वाँकी रहँदा नेपालमा फुटवल फिभर देखिएको छ । फुटवलका फ्यानहरु विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दै बिभिन्न देशका पक्षको वहसमा उत्रिसकेका छन् ।
खासमा कसरी शुरु भयो विश्वकप ? र, अहिलेको विश्वकपका विवादहरु के हुन ? त्यसबारेमा यसमा चर्चा गरिएको छ ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता थालनीको कथा अन्तराष्ट्रिय फुटबल महासंघ, फिफा सँग जोडिएको छ भने फिफाको कथा विभिन्न देशमा स्थापना भएका राष्ट्रिय फुटबल संघको विकाससँग जोडिएको छ ।
सन् १८६६ मा विश्वको पहिलो राष्ट्रिय फुटबल संघको रूपमा ‘इङल्याण्ड फुटबल एसोसिएशन’ ( एफए) गठन भइसकेको थियो । केही वर्षपछि अरू देशमा पनि धमाधम राष्ट्रिय फुटबल संघ स्थापना हुन थाले । यसरी फुटबल खेल र त्यसका राष्ट्रिय संघको विस्तार हुँदै गएपछि एउटा अन्तराष्ट्रिय फुटबल संघको आवश्यकता सर्वत्र महसुस हुन थाल्यो ।
यही खाँचोको निकास खोज्ने क्रममा फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क, स्पेन, स्वीडेन र स्विजरल्याण्डसमेत सात देशका प्रतिनिधि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भए । यही भेलाले २९ मे १९०४ मा फुटबलको सर्वोच्च संस्था ‘अन्तराष्ट्रिय फुटबल महासघ’ (फेडरेसन इन्टरनेशनल डे फुटबल एसोसिएशन, फिफाको औपचारकि गठन भयो । इङल्याण्ड दुई वर्षपछि फिफा सदस्य बन्यो । त्यसपछि अरू देशहरू पनि धमाधम यसको सदस्य हुने क्रम चल्यो, जुन अहिले पनि जारी रहेको छ । अहिले दुई सयभन्दा बढी देश फिफा सदस्य छन् । नेपाल सन् १९७० मा फिफाको पूर्ण सदस्य बनेको हो ।
विश्व कप फुटबल प्रतियोगिताको थालनीको श्रेय आधुनिक ओलम्पिक खेलकूद प्रतियोगिताको सफल सुरूवातलाई जान्छ । सन् १९०० मा भएको दोस्रो ओलम्पिक खेलकूदमा फुटबल पहिलोपटक समावेश गरिएको थियो । ओलम्पिक फुटबलको सफलताले उत्साहित भएका फिफा पदाधिकारीहरूले अन्तराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता ओलम्पिकको घेराभित्र सीमित राख्न नहुने निष्कर्ष निकाले । छलफल चल्दै जाँदा अन्तत ः २६ मे १९२८ मा बसेको फिफा एम्स्टर्डम कंग्रेसले युगान्तकारी निर्णय ग¥यो । हरेक चार–चार वर्षको अन्तरालमा फिफा सदस्य देशहरूबीच विश्व कप प्रतियोगिता आयोजना थाल्ने र पहिलो विश्व कप सन् १९३० मा गर्ने कुराको निचोड निकालियो । अनि अर्को वर्ष, सन् १९२९ को बार्सिलोना फिफा कंग्रेसले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व उरूग्वेलाई प्रदान ग¥यो ।
फलस्वरूप, राजधानी मोन्टेभिडियोमा एक लाख दर्शक अट्ने नवनिर्मित रंगशाला स्टेडियम देल सेन्टेनारियोमा आइतबार १३ जुलाई १९३० मा फ्रान्स र मेक्सिकोबीच पहिलो विश्व कपको पहिलो म्याच विधिवत् उद्घाटन खेलको रूपमा सम्पन्न भयो ।
पहिलो विश्वकप आयोजना हुँदा फिफा सदस्य देश संख्या जम्मा ४१ थियो । त्यो बेला छनोट चरण प्रतियोगिता पनि भएको थिएन । तसर्थ, विविध कारणले गर्दा पहिलो विश्व कप प्रतियोगितामा मात्र १३ देश सहभागी भएका थिए । तर दोस्रो विश्वकपमा भने सदस्य देशको संख्या धेरै भएकोले उनीहरूबीच छनोट चरण प्रतियोगिता गराइएको थियो । र, फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि १६ देश छनोट भएका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म छनोट चरण र त्यही १६ देशबीच नै फाइनल स्पर्धा हुने प्रचलन रहँदै आयो । तर सदस्य संख्या र स्तर बढ्दै गएको तुलनामा त्यो संख्या कम महसुस हुन थाल्यो । फलतः सन् १९८२ को बाहौं विश्व कपदेखि यसलाई बढाएर २४ देश पु¥याइयो । पुनः १९९८ को १६ औं संस्करणदेखि विश्व कप उपाधिको फाइनल चरणमा भिड्न पाउने देशको संख्या ३२ पु¥याइएको हो । हाललाई यही संख्या कायम राखिएको छ । (विकिपिडियाको सहयोगमा)
सुरु हुनु अघिका विवाद
एजेन्सी– फिफा विश्वकप खेल पटकपटक विविध कारणले विवादमा आउने गर्दछ । यसपटक भने फिफा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा बढी विवादित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । ताजा विवाद मेक्सिकोको टिमका कारण भएको बताइन्छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार, मेक्सिको टिमका खेलाडीहरुले रुस जानुअघि यौन व्यवसायी महिलाहरुसँग पार्टी गरेका थिए । टिम व्यवस्थापनले भने खेलाडी खाली समयमा स्वतन्त्र हुने भन्दै यो घटनामा सफाइ दिएको छ । उता रुसको राजधानी मस्कोमा पर्यटकका लागि रोबोट सेक्स सेन्टर खोलिएका कारण पनि विवाद भएको छ ।
रुसलाई २०१० मै यो विश्वकप आयोजना गर्न दिने निर्णय भएको थियो । यद्यपि त्यतिबेलादेखि नै यो विश्वकपका विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । यी विवाद यतिसम्म ठूला र धेरै भए कि यस्तो विवाद यसअघि विश्वकप आयोजना गर्ने कुनै पनि देशका विषयमा भएका थिएन । यसपटकका विवादहरु सडकका कुकुर मार्नेदेखि रुसलाई नाजी हिटलरको जर्मनीसँग तुलना गर्नेसम्मका छन् ।
के कस्ता छन् विवाद ?
विवाद १. २० लाख सडक कुकुर मार्ने निर्देशन
विश्वकप सुरु हुनुअघि रुस सरकारले आफ्ना खेल आयोजना हुने ११ शहरका २० लाख सडक कुकुर र बिराला मार्नको लागि साढे १९ लाख डलर (२० करोड नेपाली रुपैयाँ) को ठेक्का दिएको थियो । यसअघि रुसले शीतकालीन ओलम्पिकका बेलामा पनि हजारौं सडक कुकुर मारेको थियो । पशु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले यसको तीव्र विरोधर आलोचना गरे । पछि रुसका उपप्रधानमन्त्री विटाली मुटकोले ती कुकुरलाई समाथेल शेल्टरमा राख्ने आश्वासन दिए पछि विवाद केही मथ्थर भएपनि उनको निर्देशनपछि पनि कुकुर मारिएको आरोप लागेको छ ।
विवाद २. पैसा दिएर विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार लिएको
डिसेम्बर २०१० मा २०१८ को विश्वकप रुसमा आयोजना हुने घोषणा गरिएको थियो । बेलायत, नेदरल्याण्ड र पोर्चुगलजस्ता प्रतिस्पर्धीको बीचमा रुस छनोट हुँदा रुसमाथि फिफा कार्यकारीलाई पैसा दिएर आफ्नो हकमा फैसला गराएको आरोप लगाइयो । घोषणाको ठिक १ वर्ष अगाडि रुसले फुटबलका संरचनाको लागि १२ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । रुसले आफूले विश्वकप आयोजना गर्न पाउने आधिकारिक घोषणा नहुँदै संरचनाको लागि यति ठूलो रकम खर्च गर्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरियो । रुसले विश्वकप आफूले पाउने थाहा भएरै ठूलो रकम खर्च गर्ने योजना लागू गरेको आरोप लाग्यो । आरोपपछि अनुसन्धानहरु भएपनि यो प्रमाणित हुन भने सकेन ।
विवाद ३. रुसी जासुसको बेलायतमा हत्या, शाही परिवारले गरे विश्वकप बहिष्कार
यही ४ मार्चमा रुसका जासुसी एजेन्सीका पूर्वअधिकारी सर्जेइ स्क्रिपल र उनकी छोरी युलिया बेलायतको सेलिस्बरीमा मृत फेला परे । जाँचमा उनीहरुलाई विष दिएर मारिएको खुलासा भयो । १९९० मा स्क्रिपलले डबल एजेन्टको रुपमा काम गरेका थिए । बेलायतको जासुसी एजेन्सीको लागि काम गरेको आरोपमा उनलाई रुसमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि उनको पक्ष बेलायतले लियो र उनी बेलायतमै बस्न थालेका थिए । उनको हत्यालाई बेलायतले निकै गम्भीरतासाथ लियो र यसको लागि रुसलाई जिम्मेवार मान्यो । बेलायतले विश्वकप नै बहिष्कार गर्नुपर्ने माग समेत उठे । तर, फुटबल बेलायतमा निकै लोकप्रिय खेल भएकोले बेलायत सरकारले आफ्नो फुटबल टिम भने बरुस पठाउने भयो । तर, विश्वकपको उद्घाटनदेखि समापनसम्म कुनै पनि कार्यक्रम वा खेलमा बेलायती मन्त्री उपस्थित नहुने निर्णय भयो । बेलायतको शाही परिवारले पनि विश्वकप बहिष्कार गर्यो । विश्वकपको इतिहासमा बेलायतको शाही परिवारको कुनै पनि सदस्य उपस्थित नरहने यो पहिलो पटक हो ।
विवाद ४. क्रिमियामाथि कब्जा
२०१४ मा क्रिमिया रुसमा बिलय भयो । यसमा बेलायत र अमेरिकाले रुसको तुलना नाजी हिटलरसँग गरे । बेलायती र अमेरिकी सांसदहरुले फिफाका अध्यक्ष सेट ब्लाटरलाई पत्र लेखेर विश्वकप फुटकलको इभेन्ट खोस्न माग गरे । तर ब्लेटरले भने यो मागलाई खारेज गर्दै भने ‘विश्वकप इभेन्ट आयोजना गर्ने अधिकार रुसलाई दिइसकिएको छ । अब यो फैसलाबाट पछि हट्न सकिन्न ।’
विवाद ५. खेलाडीमाथि डोपिङ आरोप
२०१४ मा जर्मनीको मिडिया एआरडीले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो, जसमा २०११ देखि नै रुसमा सरकारकै सहयोगमा डोपिङ गरिएको बताइएको थियो । २०१५ मा वल्र्ड एन्टि डोपिङ एजेन्सीले पनि रुसको आलोचना गरेको थियो । २०१५ मा इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ एथेलिट्स फेडरेशनले रुसलाई एथलिट कार्यक्रममा भाग लिन अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाइदियो । जाँचका क्रममा २०११ देखि २०१५ सम्म रुसका १ हजार खेलाडीले ड्रग्स लिएको खुलासा भयो । यसमा ३३ फुटबलर पनि थिए । यही आधारमा ब्रिटेन र स्वीजरल्याण्डले फिफाको विश्वकप इभेन्ट खोस्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । यद्यपि यो प्रयास असफल भयो ।